လူကြီးများအတွက် အကောင်းဆုံး ဘုတ်ဂိမ်း 60 | အပန်းဖြေပေးပါ။
ဣဇာက်သည် | 17/12/2021 17:48 | အဆင့်မြှင့်တင် 20/12/2021 16:09 | ယေဘုယျ
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကို ကြေညာပြီးကတည်းက၊ လူကြီးများအတွက်ဘုတ်ဂိမ်းများ သူတို့ရဲ့ ရောင်းအားက တဟုန်ထိုးတက်လာတယ်။ အကြောင်းရင်းမှာ အချို့သော ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကြောက်ရွံ့မှုများ ရင်ဆိုင်ရသောအခါတွင် မိသားစု သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများနှင့် စားပွဲဝိုင်းတွင် အိမ်၌နေပြီး ရယ်မောခြင်းနှင့် အပြိုင်အဆိုင် ကစားခြင်းထက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်များကို ကုန်ဆုံးစေခြင်းထက် ပိုကောင်းမွန်ပြီး ဘေးကင်းသော အစီအစဉ်မှာ အဘယ်နည်း။
သို့သော်၊ ၎င်းတို့သည် တခါတရံတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ အများအပြားရှိနေသည်။ ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ သိတယ်။. ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် သင်သည် ပိုနားလည်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများနှင့် ပတ်သက်သော အရာအားလုံး အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်၊ အမျိုးအစားများနှင့် ကွဲပြားသောရွေးချယ်စရာများ အိမ်တွင် အကောင်းဆုံးအချိန်များကို ဖြုန်းသင့်သည်...
1 အရောင်းရဆုံး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဘုတ်ဂိမ်းများ
2 လူကြီးများအတွက် အကောင်းဆုံး board game ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
2.1.1 Mimika ကို ဖြတ်လိုက်ပါ။
2.1.2 Gop Pint
2.1.3 Soundrels အမျိုး
2.1.5 သူငယ်ချင်းများကြား ဘုတ်ဂိမ်း
2.1.6 မင်းက အရူးကို ဖျက်လိုက်
2.2 မိသားစုအမျိုးအစားအတွက် အသေးအဖွဲ
2.2.1 Trivial Pursuit မူရင်း
2.2.5 စကားလုံး pass
2.2.7 အမိုက်စား ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကစားပါ။
2.3 သူငယ်ချင်းများနှင့် ကစားရန်
2.3.1 4-in-1 ဂိမ်းပေါင်းစုံစားပွဲ
2.3.6 ငါ့မှာ နှစ်ယောက်ရှိတယ်။
2.3.7 EXIN ပါတီ
2.3.8 ကြက်တူရွေးအတွက် ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား၊ မဟုတ်ဘူး လျှို့ဝှက်ချက်လား။
2.4.3 ငါက ငှက်ပျောသီး
2.4.4 လူယုတ်မာတွေ ဆက်ပြီး ပြစ်မှားကြပါစို့
2.5.24လိုင်း
2.5.3 (un) အသိမိတ်ဆွေများလား?
2.5.4 စကားလုံးတွေနဲ့ ချစ်တယ်။
2.5.5 Devir လျှို့ဝှက်ကုဒ် Duo
2.5.6 Hasbro သင်္ဘောနစ်မြုပ်
2.6.3 Hasbro အန္တရာယ်
2.7 အကောင်းဆုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဂိမ်းများ
2.7.3 Devir တားမြစ်ကျွန်း
2.8.1 2000 အပိုင်းအစပဟေ.ိ
2.8.2 ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘော 3D ပဟေဠိ
2.8.5 UNO မိသားစု
2.8.7 စစ်တုရင်ဘုတ်၊ checkers နှင့် backgammon
2.8.8 Parcheesi + OCA ဘုတ်အဖွဲ့
2.9.1 အွန်လိုင်းဘုတ်ဂိမ်းများနှင့် အက်ပ်များ
2.9.2 မြှင့်တင်ထားသော လက်တွေ့ဂိမ်းများ
3.1 လူကြီးများအတွက် board games ကဘာလဲ။
3.2 ဒီလို ဖျော်ဖြေရေး အမျိုးအစားကို ဘာကြောင့် ဝယ်တာလဲ။
အရောင်းရဆုံး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဘုတ်ဂိမ်းများ
ပမာဏအများကြီးရှိတယ်၊ လူကြီးများအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများမျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရောင်းချခဲ့သည့် ဂန္တဝင် နှစ်မျိုးလုံးအပြင် ခေတ်အမီဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏စာရင်းအားဖြင့်လမ်းညွှန်ပါစေ။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးများ လက်တွေ့ဘဝကနေ သူတို့ဟာ အရောင်းရဆုံးတွေဖြစ်ပြီး၊ အများကြီးရောင်းရရင်... အဲဒါက သူတို့မှာ ထူးထူးခြားခြား တစ်ခုခုရှိလို့ပါပဲ။
GUATAFAC - ဂိမ်း၏ ...
မိသားစု ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပါတီပွဲလုပ်မှာလား။ အာမခံချက်ရှိသော ရယ်မောသံများ လိုအပ်ပါသလား။ ထို့နောက် လူကြီးများအတွက် ဤဘုတ်ဂိမ်းသည် သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာဖြစ်သည်။ အသက် 16 နှစ်အထက်လူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင့်မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများ၏ အထူးဆန်းဆုံးသော အတွေးအမြင်များကို ခန့်မှန်းရန် သင့်တွင် 8 စက္ကန့်အချိန်ရှိသည်။ အနက်ရောင်ဟာသနှင့် ညစ်ပတ်သောပြက်လုံးများကို မေးခွန်းအက္ခရာ ၄၀၀ နှင့် အထူးစာလုံး ၈၀ ဖြင့် စုဆောင်းထားသည်။
လူကြီးများအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခု။ စိန်ခေါ်မှု အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်၊ အားလုံးဟာ ရယ်မောစရာတွေ ပြေပျောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ လုံးဝ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ပြီး ရယ်စရာကောင်းတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေကို ပေးဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် အသက် 18 နှစ်အထက်လူတွေအတွက်ပါ...
၎င်းသည် အရောင်းရဆုံးများကြားတွင် တည်ရှိနေသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ မတူညီသောစမ်းသပ်မှု 12 ခုနှင့်4အမျိုးအစားများဖြင့် အသင်းများတွင် သင်ကစားနိုင်သည်။ ပုံဆွဲစမ်းသပ်မှုများ၊ မေးခွန်းများ၊ အတုခိုးခြင်း၊ သရုပ်ဆောင်ခြင်း စသည်တို့ဖြင့် သင်ဘယ်လောက်ပဲ ကစားနေပါစေ သင့်ကို ဘယ်တော့မှ ငြီးငွေ့စေမယ့် တစ်ခုတည်းသော အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူတိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာ ကစားနိုင်စေမှာပါ။
Party & Co ကိုဝယ်ပါ။
600 နာရီအထိရယ်မောရန်အာမခံချက် 234 ကတ်ထက်ပိုသောရဲရဲတောက်ကတ်ဂိမ်း။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော အခြေအနေများ၊ လူမည်းဟာသနှင့် 0% ကျင့်ဝတ်များကို ရောနှောထားသည့် လူကြီးများအတွက် ဂိမ်းတစ်ခု။ ဘယ်အရာမဆို ရပ်တန့်မနေဘဲ ရယ်မောတတ်ပါသည်။ ယင်းအတွက် ကစားသမားတစ်ဦးစီတွင် အဖြူရောင်ကတ် (အဖြေများ) 11 ခုရှိပြီး ကျပန်းကစားသမားတစ်ဦးသည် နေရာလွတ်တစ်ခုပါရှိသော အပြာကတ်ကို ဖတ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ကစားသမားတစ်ဦးစီသည် ဝါကျကို ပြီးမြောက်ရန် ရယ်စရာအကောင်းဆုံးကတ်ကို ရွေးချယ်သည်။
လူကြီးများအတွက် အကောင်းဆုံး board game ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ဘယ်အချိန်မှာ လူကြီးများအတွက် အကောင်းဆုံး board game ကိုရွေးချယ်ပါ။ သံသယများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး လူတိုင်းက တူညီသည့် အပြင်အဆင်များနှင့် ဂိမ်းဖော်မတ်များကို မကြိုက်ပါ။ ၎င်းတို့သည် မတူညီသောအဖွဲ့များအတွက်၊ အချို့သော သီးခြားမိသားစုဝင်များအထိ၊ ၎င်းတို့၏ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် အပြင်အဆင်ကြောင့် သူငယ်ချင်းအဖွဲ့များအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သည့် အခြားအုပ်စုများအတွက်၊ နှင့် အချို့သော ဂိမ်းအမျိုးအစားအလိုက် သီးခြားမေးခွန်းများပင်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် မတူညီသော အလိုအပ်ဆုံး အမျိုးအစားခွဲများကို သိထားသင့်သည်-
အထူးသဖြင့် သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ ရယ်မောမှုတွေအတွက် ထင်ရှားတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းတွေ ရှိပြီး ဘယ်သူမဆို ရယ်မောစေမယ့် ရယ်မောစရာတွေ ရှိပါတယ်။ သင့်အား ရယ်စရာကောင်းသော အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်စေသော အရာများ သို့မဟုတ် သင့်အား အရှိဆုံး ကာတွန်းစိတ်ဓာတ်ကို ထုတ်ပေးသည်။ သင်ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ မေ့မရနိုင်တဲ့ ညနေခင်းတွေကို အမြဲအမှတ်ရနေစေမယ့် အရာတွေပါ။ ရယ်စရာအကောင်းဆုံး အားလုံးထဲက တွေကတော့-
Mimika ကို ဖြတ်လိုက်ပါ။
Glop Mimika - ဂိမ်း၏ ...
၎င်းကိုသင်တွေ့ဆုံသောအခါ၊ ၎င်းသည် သင်အကြိုက်ဆုံးများထဲတွင်ပါဝင်မည့် အတုခိုးစရာလူကြီးဘုတ်ဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ မိသားစု သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများအတွက် အာမခံချက်အပြည့်ရှိသော ရယ်မောသံများနှင့် ဗျူဟာများ၊ မတူညီသောအဆင့်များ၊ အမျိုးအစားများနှင့် ကတ်အမျိုးအစားတစ်ခုစီမှတစ်ခုရယူရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
Glop Pinta - ဂိမ်းများ...
ဖျော်ဖြေမှု နှင့် ပျော်ရွှင်စရာများ လိုအပ်နေချိန်တွင် မိသားစု သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ၎င်းကို ယခင်ပုံစံတစ်ခုနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် အရင်ပုံနဲ့ မတူတာက ပန်းချီနဲ့ မှန်းဆခြင်းအကြောင်းပါ။
ကတ်များကိုအခြေခံ၍ ရယ်စရာကောင်းသော စပိန်နိုင်ငံထုတ် ဂိမ်းဖြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းများနှင့် ရယ်မောရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အမိုက်စား ထိတွေ့မှုဖြင့် သင်သည် အပြစ်တင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် သင့်အား အဓိပ္ပါယ်မဲ့သော စမ်းသပ်မှုများတွင် သင်ကိုယ်တိုင် တင်သွင်းခြင်းနှင့် သင်မထင်မှတ်ထားသော လူမှုရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းအပြင် သင့်အား အပြစ်တင်လိမ့်မည်။ သင်ဘယ်လိုစတင်လဲဆိုတာ သင်သိတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် သင်ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာကို သင်မသိနိုင်ပါဘူး...
Game Off - The Batalion...
မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြုလုပ်ပြီး သင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်၊ သတ္တိ၊ ကျွမ်းကျင်မှု သို့မဟုတ် ကံကောင်းခြင်းများကို သရုပ်ပြရန် အသက်အရွယ်အားလုံးနှင့် တစ်မူထူးခြားသော တိုက်ပွဲပေါင်း 120 ပါဝင်သည့် ပျော်စရာဂိမ်းတစ်ခု။ ၎င်းတို့သည် လျင်မြန်ပြီး အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော တိုက်ပွဲများဖြစ်ပြီး ကျန်ကစားသမားများသည် မည်သူအနိုင်ရသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အကဲဖြတ်ဒိုင်များအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
😈 သူငယ်ချင်း🤣 -Game...
သူငယ်ချင်းများစုရုံးခြင်း၊ လူပျိုကြီး သို့မဟုတ် လူပျိုကြီးပါတီများ စသည်တို့အတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။ ရယ်မောသံတွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် မေးခွန်းလေးတွေရဲ့ ကျေးဇူးပါ။ ဖဲချပ်များကြားရှိ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် မေးခွန်းများဖြင့် အရှက်ကွဲရလိမ့်မည်...
မင်းက အရူးကို ဖျက်လိုက်
Borras - ရူးသွပ်မှု |...
၈ နှစ်သားအရွယ်မှစ၍ မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပါတီအတွက် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခု။ နားထောင်ခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း၊ အတုခိုးခြင်း၊ ရယ်စရာကောင်းသောစွပ်စွဲချက်များနှင့် နောက်ဆုံးရူးသွပ်မှုကဲ့သို့ အမျိုးမျိုးသော စမ်းသပ်မှုများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောဂိမ်း။ loci 8 ခုလုံးကို ပထမဆုံးရရှိသူက King of Fools သရဖူကို ဆွတ်ခူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Hasbro ဂိမ်း- TABOO ...
၎င်းသည် မိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းသည် ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းအတွက် တားမြစ်ထားသော စကားလုံးများကို အသုံးမပြုဘဲ သဲလွန်စပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ မွမ်းမံထားသောအကြောင်းအရာဖြင့် စကားလုံး 1000 အထိနှင့် မတူညီသောကစားနည်း5ခုဖြင့်။ Altar boy နှင့် Xavier Deltell တို့သည် Me slips အစီအစဉ်ရှိ ကြွက်တက်နေသော ကုလားထိုင်တွင် အခက်တွေ့နေပါက၊ ယခု ၎င်းတို့ကို စာနာနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Hasbro - Jenga ပြန်လည်စတင်ခြင်း...
အိတ်ထဲတွင် Mega Hi-Tower -...
ဂန္တဝင်ဂန္ထဝင်များထဲမှ အခြားဂန္ထဝင်၊ ရိုးရှင်းသော၊ ကစားရလွယ်ကူသည်၊ ပရိသတ်အားလုံးအတွက်နှင့် ပျော်စရာ။ သစ်သားတုံးများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော မျှော်စင်ဖြစ်ပြီး ပြိုကျမသွားစေရန် တလှည့်စီ တလှည့်စီ လုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အပိုင်းကို ဖယ်ရှားခြင်းသာမကဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံကို တတ်နိုင်သမျှ မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားခြင်း နှင့် နောက်အလှည့်တွင် သူ့ကိုထိသော ပြိုင်ဘက်သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေပါသည်။
Jenga ကိုဝယ်ပါ။ Giant Jenga ကိုဝယ်ပါ။
သင်ကြိုက်လျှင် မိသားစုအမျိုးအစား Trivial အတွက် ဘုတ်ဂိမ်းဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု လက်ဆောင်များကို မည်သည့်နေရာတွင် ပြသရမည်ကို မေးခွန်းများနှင့်အတူ၊ ထို့နောက် ဤအခြားရွေးချယ်မှုကို သင်ကြည့်ရှုသင့်သည်။ ဤနေရာတွင် အသိဆုံးသူကို ဆုချရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသော ဆောင်းပါးအချို့ကို ဤနေရာတွင် သင်တွေ့ရပါမည်။
Trivial Pursuit မူရင်း
ဟုတ်ပါတယ်၊ အသေးအဖွဲဂိမ်းတွေထဲမှာ၊ Trivial ကိုယ်တိုင်က မရှိမဖြစ်ပါ။ မေးခွန်းအားလုံးကို မှန်ကန်စွာဖြေဆိုရန်နှင့် အခြားသူများရှေ့တွင် ဒိန်ခဲအပိုင်းအားလုံးကို ရယူရန် သင်ကြိုးစားမည့် ကွဲပြားသောအမျိုးအစားများပါရှိသော အထွေထွေယဉ်ကျေးမှုအသေးစိတ်ဂိမ်းတစ်ခု။
Trivial Pursuit ကိုဝယ်ပါ။
Eleven Force LQSA အသေးအဖွဲ...
အကယ်၍ သင်သည် La que se avecina ၏ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်ပါက၊ အပြင်အဆင်များစွာရှိသည့် Trivial ကဲ့သို့သော ဘုတ်ဂိမ်းများ (Harry Potter၊ Star Wars၊ Dragon Ball၊ The Lord of the Rings၊ Big Bang Theory၊ ...) သူတို့အထဲမှာ စပိန်စီးရီး LQSA လည်းပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ စီးရီးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်အားလုံးကို ကောင်းကောင်းသိတယ်လို့ ထင်ပါသလား။ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပါ...
အသေးအဖွဲ LQSA ကိုဝယ်ပါ။
အသက် 8 နှစ်မှ မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် နောက်ထပ်အသေးအဖွဲဂိမ်း။ ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခု၊ မေးခွန်း 50 ပါသော ကတ် 500 နှင့် မှန်ကန်စွာဖြေဆိုရန်နှင့် အမှတ်ရရန် သင်၏ဉာဏ်ပညာ။ အဲဒါက ဒိုင်းနမစ်၊ ဒါပေမယ့် သတိထားပါ... မေးခွန်းတွေက ထောင်ချောက်တွေ ပြည့်နှက်နေပြီး တစ်ခါတစ်လေ ဉာဏ်ရည်က အရှိန်ထက် ပိုကောင်းတယ်။
အသက် 12 နှစ်မှလူများသည်2သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကစားသမားများဖြင့်ကစားနိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ဤဘုတ်ဂိမ်းသည် နာမည်တူနာမည်တူ ရုပ်မြင်သံကြားပဟေဠိကို အခြေခံထားသည်။ သင်သည် မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်မှု ရှုပ်ထွေးလာသောအခါတွင် သင့်တွင် သင်္ကေတများ အတွဲလိုက်ရှိပါမည်။ ရွေးချယ်စရာအဖြေများစွာကို သင့်အား ပေးဆောင်ထားပြီး မှန်ကန်သောအဖြေတစ်ခုကို သင်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အကြိမ်တိုင်းတွင် အခက်အခဲအဆင့်ကို တိုးမြင့်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဝယ်မယ် ဘယ်သူက သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ချင်တာလဲ။
ရုပ်မြင်သံကြားပဟေဋ္ဌိကိုအခြေခံ၍ မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် ဘုတ်ဂိမ်း။ အချိန်မကုန်မီ စကားလုံးများကို ခန့်မှန်းရန် နောက်ဆုံးမေးခွန်းပေါင်း6ကျော်နှင့် နောက်ဆုံး rosco ဖြင့် သင့်အသိပညာကို မတူညီသော စမ်းသပ်မှု 10.000 ခုတွင် စမ်းသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Hasbro ဂိမ်းဆော့ခြင်း -...
အပြင်မှာ ရယ်စရာအကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခု၊ အရိုးရှင်းဆုံး၊ ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ ဝေါဟာရတွေကို စမ်းသပ်စေမယ့်ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ Scattergories များတွင် သင်သည် အသက်2နှစ်မှ ကစားသမား6ဦးမှ 13 ဦးအထိ ကစားနိုင်ပြီး အမျိုးအစားတစ်ခုနှင့်ဆိုင်သော စကားလုံးများနှင့် တိကျသောစာလုံးဖြင့် အစပြုသော စကားလုံးများကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။
အမိုက်စား ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကစားပါ။
အမိုက်စား ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ကစားပါ...
အသက်အရွယ်အားလုံးနှင့် နည်းပညာ၊ အင်တာနက်၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်နှင့် စူပါဟီးရိုးများကမ္ဘာမှ ပရိသတ်များအတွက် ခေါင်းစဉ်တစ်ခု။ ဆိုလိုသည်မှာ geek များအတွက်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ဤအကြောင်းအရာများအားလုံးတွင် သင့်အသိပညာ သို့မဟုတ် သင့်သူငယ်ချင်းများကို စမ်းသပ်နိုင်သည်။
မိသားစုလိုက် ကစားရတာနဲ့ မတူပါဘူး။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူလေထုက အနည်းငယ် ကွဲပြားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်၊ သင့်အား သူငယ်ချင်းများနှင့်သာ သင်ပြလေ့ရှိသည်၊ သို့မဟုတ် မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် မသင့်လျော်ကြောင်း ပြသသည့်အကြောင်းအရာများပါ၀င်သည့် အကြောင်းအရာများဖြင့် ၎င်းတို့သည် အလွန်ပျော်စရာကောင်းပါသည်။ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဲဒီအခိုက်အတန့်တွေအတွက် မင်းရှာတွေ့နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်တွေကတော့-
Leomark Multigame စားပွဲ...
ဤဂိမ်းပေါင်းစုံစားပွဲသည် သူငယ်ချင်းများနှင့် ကစားရန် ကောင်းမွန်သည်။ စားပွဲတစ်ခုတည်းတွင် ဘီလီယက်၊ ဘောလုံး၊ ပင်ပေါင်နှင့် ဟော်ကီကဲ့သို့သော ဂိမ်း ၄ ခု ရှိသည်။ သစ်သား၊ ကြံ့ခိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အတိုင်းအတာ4× 120 စင်တီမီတာနှင့် အမြင့် 61 စင်တီမီတာရှိသော သစ်သားကဲ့သို့သော အရည်အသွေးပစ္စည်းများဖြင့် ၎င်းကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ စုစည်းထားပြီး ဥရောပအရည်အသွေးနှင့် ဘေးကင်းရေးလက်မှတ်များပါရှိသည်။
အထူ 15 မီလီမီတာရှိသော MDF သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရည်အသွေးကောင်းသောစားပွဲဘောလုံး။ အတိုင်းအတာမှာ 121x101x79 cm ဖြစ်သည်။ တည်ငြိမ်ပြီး အမြင့်-ချိန်ညှိနိုင်သော ခြေထောက်များဖြင့်။ ဂိုးကောင်တာ၊ စတီးတုံးများနှင့် စလစ်မကပ်သော ရာဘာလက်ကိုင်များ၊ ဆေးခြယ်ထားသော ရုပ်ပုံများနှင့် ခွက်ကိုင်ဆောင်သူ2ခုတို့ကဲ့သို့သော အသေးစိတ်အချက်များ ပါဝင်သည်။ ဘောလုံးနှစ်လုံးနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်များ ပါဝင်ပါသည်။
Dione S500o - စားပွဲတင်...
ဒြပ်စင်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့်အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်တွင်နေရာယူရန်သင့်လျော်သောခေါက်ပင်ပေါင်စားပွဲ။ မျက်နှာပြင် 274 × 152.5 × 76 စင်တီမီတာရှိသော ကြံ့ခိုင်သောဘုတ်ဖြင့်။ ၎င်းတွင် လွယ်ကူစွာ ကွေ့ရန် သို့မဟုတ် ရွှေ့ရန် ဘီး ၈ ဘီးအပြင် ဂိမ်းအတွင်း ရွေ့လျားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဘရိတ်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဂိမ်းဘောလုံးများနှင့် လှော်တက်များ မပါဝင်သော်လည်း ၎င်းတို့ကို သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သည်-
ဂေါ်ပြားနှင့် ဘောလုံးများ ဝယ်ပါ။
Repos ထုတ်လုပ်မှု- အချိန်...
ဇာတ်ကောင်ကို ခန့်မှန်းရန် သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အစစ်အမှန် သို့မဟုတ် စိတ်ကူးယဉ် နာမည်ကြီးသူများ ဖြစ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို အမည်မဖော်ဘဲ ဇာတ်ကောင်တစ်ခုစီ၏ ဖော်ပြချက်ပေးသည့် ဖော်ပြချက်အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပထမအချီမှာ၊ နောက်အချီမှာ အဆင့်တက်လာပြီး စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ရိုက်ရမယ်။ တတိယအချီတွင်၊ အတုခိုးခြင်းသာ တရားဝင်သည်။
Zygomatic - Jungle Speed ​​​...
အမျိုးမျိုးသောအသေးစားဂိမ်းများပါရှိသောကတ်ဂိမ်း။ အသက်7နှစ်နှင့်အထက်အတွက်သင့်လျော်သည်။ သင့်နှင့်တူညီသောသင်္ကေတပါရှိသောကတ်များကိုသင်ရှာပြီး totem ကိုဖမ်းရပါမည်။ သင်္ကေတ 50 ကျော်နှင့် 55 ကွဲပြားခြားနားသောကတ်များနှင့်အတူ။ အမြန်နှုန်း၊ စောင့်ကြည့်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုများသည် အဓိကကျမည်ဖြစ်သည်။
Jungle Speed ​​ကိုဝယ်ပါ။
TENGO DUO - အသစ်...
သင်ကတ်များကစားကာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမည့် ပျော်စရာဘုတ်ဂိမ်းတစ်ခု။ မျှော်လင့်ခြင်း၊ သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် စာနာနားလည်မှု နှင့် အရှိန်အဟုန်သည် သင့်အား အောင်ပွဲဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ ကစားသမားတစ်ဦးစီသည် အခြားကစားသမားများမှပေးသောအဖြေများကို ခန့်မှန်းရန်ကြိုးစားရမည်ဖြစ်ပြီး အခြားသူများသည် ၎င်းတို့၏အဖြေများကို ခန့်မှန်းရန်ကြိုးစားရမည်ဖြစ်သည်။
Duo ရှိပြီ ဝယ်ပါ။
EXIN Fiesta - ဂိမ်း၏ ...
၎င်းသည်3in 1 ပါသည့်သေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြစ်မဲ့ကစားသမားများသည် လျှို့ဝှက်လူသတ်သမားသည် မည်သူဖြစ်သည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရမည်၊ ဝိုင်းတစ်ခုစီ၏စည်းမျဉ်းများကို တတ်နိုင်သမျှ စကားလုံးများစွာ ခန့်မှန်းရန် လိုအပ်သည့် အခြားအဖွဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် လူသတ်ဂိမ်းကို သင်တွေ့လိမ့်မည် (ဖော်ပြချက် ၊ အတုခိုးခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း၊ အသံ) နှင့် သင့်အဖွဲ့နှင့်အတူ 1 မိနစ်အတွင်း ကတ်များစွာကို တတ်နိုင်သမျှ ဖြေဆိုရန် ကြိုးစားသည့် အမြန်နှုန်းဂိမ်း။
EXIN Fiesta ဝယ်ပါ။
ကြက်တူရွေးအတွက် ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား၊ မဟုတ်ဘူး လျှို့ဝှက်ချက်လား။
Al Loro Games - နီစီနီ...
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် သူငယ်ချင်းများနှင့် ပါတီပွဲများအတွက် အကောင်းဆုံး board game တစ်ခု။ ၎င်းတွင် လူများကို Yes သို့မဟုတ် နံပါတ် 10 ဟု မပြောဘဲ ပြင်ဆင်ထားပြီး စပ်သော မေးခွန်း2ခု ဖြေဆိုခြင်း ပါ၀င်သည် ။ သင်ယခုတွေ့ဖူးသော အခြားသူများနှင့် အပြင်ထွက်သည့်အခါ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရန် နည်းလမ်းတစ်ခု။
ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား၊ မဝယ်ဘူးလား
အချို့လည်းရှိပါတယ် ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများမျိုးဆက်သစ်များအတွက် ပိုမိုလတ်ဆတ်ပြီး ခေတ်မီလေကောင်းလေသန့်ဖြင့်၊ ဤအသက်အရွယ်အုပ်စုအတွက် သီးသန့်အခင်းအကျင်းများ သို့မဟုတ် နည်းပညာအသစ်များ၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို ဗဟုသုတအဖြစ် ရည်ညွှန်းသော ငယ်ရွယ်နုပျိုသော ဗန်းစကားများဖြင့် ထုတ်ကုန်များ။ ယင်းတို့အနက် အချို့သော ဥပမာများမှာ-
၎င်းသည် လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Big Bang Theory စီးရီးပြီးနောက် အထူးသဖြင့် Dragons နှင့် dungeons များသည် ၎င်း၏ဇာတ်ကောင်များ ကစားလေ့ရှိပြီးကတည်းက ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပါက အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများထဲမှတစ်ခု။ ကစားသူများသည် ဝင်္ကပါများကို ရှာဖွေခြင်း၊ ရတနာများကို လုယက်ခြင်း၊ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် ဘီလူးများနှင့် တိုက်ခိုက်ခြင်း စသည်တို့အထိ ရောယှက်စွန့်စားမှုအမျိုးမျိုးတွင် ၎င်းတို့ကိုယ်ကို နှစ်မြှုပ်ရမည့် ပုံပြင်ပြောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
D&D starter box ကိုဝယ်ပါ။
D&D Essential Kit ကိုဝယ်ပါ။
Goliath Game board ၊...
အခြားဂိမ်းအချို့ကို တစ်ခုတည်းအဖြစ် ရောနှောထားသော ဂိမ်းတစ်ခု။ ၎င်းသည် ဗျူဟာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သင့်ပြိုင်ဘက်များကို သင်နှင့်မတွဲမီ ၎င်းတို့ကို ဘုတ်အဖွဲ့မှ ဖယ်ရှားရန် သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြင့် ကစားနိုင်သည်။ အလျားလိုက်၊ ဒေါင်လိုက် သို့မဟုတ် ထောင့်ဖြတ်ဖြင့် အရောင်တူ ချစ်ပ် ၅ ခုကို မျဉ်းတစ်ကြောင်းတွင် သုံးပုံသဏ္ဌာန်ထားရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဖဲချပ်ကဲ့သို့ သင့်လက်နှင့်ထိမိသော ကတ်များပေါ်မူတည်၍ ၎င်းကို သင်တွေ့ရပါမည်။
အရာ သို့မဟုတ် တိရိစ္ဆာန်များကို ယုံကြည်သည့် စိတ်ရောဂါကုဌာနရှိ လူနာတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဖျော်ဖြေရေး တက်ကြွပြီး နုပျိုသော ခေါင်းစဉ်တစ်ခု၊ ကစားသူများသည် စကားမပြောနိုင်သော စက္ကန့် 90 ကြာ ဂိမ်းများနှင့်အတူ အခြားသူများကို သိစေမည့် အမူအရာများဖြင့် ၎င်းတို့သည် ၎င်းအရာဖြစ်သည်ကို သိစေရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်2ကြိမ်နှင့်အထက်ကစားနိုင်ပြီး 8 နှစ်နှင့်အထက်အတွက်သင့်လျော်သည်။ ဒါပေမယ့် သတိထားရမှာက "ဆရာဝန်" က မင်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်က မမြင်စေရဘူး၊ သူက "chota" နဲ့မတူတဲ့ အုပ်စုထဲက တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်လို့ပါ။
လူယုတ်မာတွေ ဆက်ပြီး ပြစ်မှားကြပါစို့
ဤစပိန်ဘုတ်ဂိမ်းစီးရီး၏ နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်။ အာမခံချက်ရှိသော ရယ်မောဖွယ်ရာဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခု။ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို စုဆောင်းပါ၊ ကတ်များကို မွှေပါ၊ ပထမတစ်ခုနှင့် စတင်ပါ။ ကတ်အသစ်၊ စွပ်စွဲမှု၊ လူမှုရေးစိန်ခေါ်မှု၊ WTF အမျိုးအစား ၄ မျိုးရှိသည်။ သင်အလိုရှိသောအရာကို ရရှိရန်အတွက် မေးခွန်းများနှင့် ဗလာကတ်များ။
အ ဘုတ်ဂိမ်းနှစ်ခုအတွက် ၎င်းတို့သည် ဂန္ထဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှများစွာရှိသည်။ အမှန်အတိုင်း စုံတွဲအဖြစ် ကစားရန်၊ သို့မဟုတ် အခြားစုံတွဲ အမျိုးအစားတစ်ခုခုတွင် ကစားရန်။ လူများစုဝေး၍မရသည့်အခါ အများအားဖြင့် ပိုကြီးသောအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့များလိုအပ်သည့် အခြားဘုတ်များကို အသုံးပြု၍မရသည့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများမှာ-
နေရာအလွန်များသောအိမ်တွင် ရေကူးကန်စားပွဲထားရှိခြင်းသည် အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဤထမင်းစားစားပွဲဖြင့် ရေကူးကန်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 206.5 × 116.5 × 80 စင်တီမီတာ အလျား နှင့် အမြင့် XNUMX × XNUMX စင်တီမီတာရှိသော ဤပြောင်းလဲနိုင်သော စားပွဲတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ပျော်ရွှင်မှုတို့ ပေါင်းစပ်လာပါသည်။ ၎င်းတွင်ကစားရန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအားလုံးပါဝင်ပြီးအရောင်အမျိုးမျိုးရှိတိပ်ဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Falomir - Place4ဂိမ်း...
အရောင်နှစ်မျိုးရှိသော ချစ်ပ်များ ပါဝင်ပါသည်။ သင်၏အရောင်တူညီသောမျဉ်းတစ်ခုတွင်4တန်းကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားရန်အကွက်တွင်သူတို့ကိုထည့်သွင်းရန်စိတ်ကူးဖြစ်သည်။ ပြိုင်ဘက်က သင့်ကို တားဆီးနေချိန်မှာ ဒီလိုပဲ လုပ်ရမှာပေါ့။
အွန်လိုင်း4ခုဝယ်ပါ။
(un) အသိမိတ်ဆွေများလား? –...
၎င်းသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ2ဦးအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းသာမက စုံတွဲများအတွက် အထူးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အကြောင်း သင်သိထားသည်များကို နေ့စဉ်ဘဝ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ ရင်းနှီးမှု၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အရသာ အစရှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများဖြင့် သင်စမ်းသပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းတစ်ခုပါသော စာတစ်စောင်ကို ရွေးပါ၊ သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးအဖြေကို မဲပေးပါ၊ နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို ကြည့်ရှုရန် တစ်ဖက်လူကို ဖြေခိုင်းပါ။
(Un) အသိမိတ်ဆွေတွေကို ဝယ်မလား။
စုံတွဲများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အခြားဘုတ်ဂိမ်း။ ၎င်းနှင့်အတူ သင်သည် ဆက်ဆံရေးကို ခိုင်ခံ့စေပြီး အရင်းနှီးဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်များ၌ပင် စုံတွဲကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ သိလာစေရန် ကူညီပေးပါမည်။ ကစားရန် လွယ်ကူသည်၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ခံစားချက်များ၊ ငွေကြေး၊ ဆန္ဒများ၊ ရင်းနှီးမှုများ စသည်ဖြင့် စကားစမြည်ပြောရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် မေးခွန်းများပါရှိသော ကတ် 100 ရှိပါသည်။
အချစ်ကို စကားလုံးများဖြင့် ဝယ်ယူပါ။
Devir လျှို့ဝှက်ကုဒ် Duo
၎င်းသည် သင်ယူရန်နှင့် ပျော်ရွှင်ရန် ရှုပ်ထွေးသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သိမ်မွေ့ပြီး လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောသဲလွန်စများကိုရှာဖွေရန်နှင့် လျှို့ဝှက်သူလျှိုတစ်ဦး၏ဖိနပ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ကာ ပြိုင်ဘက်မကစားမီ ဂိမ်းကိုအနိုင်ရရန် ၎င်းသည် သင့်အား အလျင်မြန်ဆုံးနှင့် အစမတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကစားနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
Hasbro ဂိမ်းဆော့- နစ်မြုပ်...
သင်၏ပြိုင်ဘက်၏သင်္ဘောများကိုနစ်မြုပ်ရန်ကြိုးစားရန် သင်သြဒီနိတ်များဖြင့် ကစားသည့် ရေတပ်ဂိမ်း။ သူတို့သည် သူရွေးချယ်ထားသော ရာထူးများတွင် တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို သင်မမြင်နိုင်သလို သူသည် သင့်အား မမြင်နိုင်ပေ။ မျက်စိကန်းတီးခတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် နေရာကို ရှာဖွေရန် ကြိုးစားနေပါသည်။ နှစ်ယောက်အတွက် ဂန္တဝင်တွေထဲက တစ်ခုဆိုတာ သံသယမရှိဘဲ...
Sink the Fleet ကိုဝယ်ပါ။
ARTAGIA ဂိမ်းပျော်စရာများနှင့် ...
ယုံကြည်မှုတိုးအောင်၊ ရယ်စရာစကားပြောဆိုမှုများ၊ ပရောပရည်လုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့် သတ္တိရှိစေမည့် စုံတွဲများအတွက် ပျော်စရာ အထူးဂိမ်း။ ကတ်တစ်ခုကို ရွေးပါ၊ မေးခွန်းကိုဖြေပါ သို့မဟုတ် အဆိုပြုထားသည့် အချစ်ရေးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ပါ။ မင်းရဲလား
Warcraft၊ Age of Empires၊ Imperium စသည်တို့ကို စွန့်ပယ်ပြီး တက်ဘလက်ဂိမ်းများသို့ ပြောင်းလိုသော ဗျူဟာပရိသတ်များသည် အောက်ပါကဲ့သို့သော ခေါင်းစဉ်များဖြင့် နှစ်သက်လိမ့်မည်-
Devir - Catan၊ ဂိမ်း...
၎င်းသည် ဆုရဗျူဟာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကစားသမားပေါင်း2သန်းကျော်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ အနိုင်ရရန် ဗျူဟာကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ရန် အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ အသက် 10 နှစ်နှင့်အထက်နှင့် ကစားသမား3သို့မဟုတ်4ယောက်အတွက် အကြံပြုထားသည်။ ၎င်းတွင် သင်သည် Catan ကျွန်းတွင် ပထမဆုံးအခြေချနေထိုင်သူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးမြို့များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ စတင်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောင်းလဲလာမယ်၊ မြို့တွေကို မြို့တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲမယ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး နည်းလမ်းတွေ တိုးတက်လာမယ်၊ အရင်းအမြစ်တွေကို အသုံးချတဲ့ နည်းလမ်းတွေ စသဖြင့်ပေါ့။
အကောင်းဆုံးဗျူဟာဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုနှင့် အဆင့်အမြင့်ဆုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခု။ ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် အကြောင်းအရာများကို ထပ်ထည့်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ချဲ့ထွင်မှုများပါရှိသော ဘုတ်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ကစားသမား2ဦးမှ5ဦးအတွက် သင့်လျော်ပြီး အသက်7နှစ်နှင့်အထက်အတွက် သင့်လျော်သည်။ သင့်နယ်မြေကို ချဲ့ထွင်ရန်၊ တိုက်ခိုက်ရန်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်များကို အနိုင်ယူရန် ဤဂိမ်းတွင် ကစားသမား 10 သန်းကျော်ကို ချိတ်ဆက်ထားသည်။
မင်းရဲ့အင်ပါယာကို အောင်နိုင်စေမယ့် ဗျူဟာရဲ့ ကြီးမြတ်မှုနောက်ထပ်။ ရုပ်ပုံ ၃၀၀၊ မစ်ရှင်ကတ်များ၊ လျှို့ဝှက်မစ်ရှင် ၁၂ ခုနှင့် သင့်တပ်များကို နေရာချထားရန်နှင့် မယုံနိုင်လောက်အောင် တိုက်ပွဲများတွင် တိုက်ခိုက်ရန် ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုပါရှိသည်။ မဟာမိတ်များ၊ အံ့အားသင့်ဖွယ်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် သစ္စာဖောက်မှုများ ပြည့်နှက်နေသည့်ဂိမ်း။
အသက် 8 နှစ်နှင့်အထက်နှင့် ကစားသမား2ဦးအတွက် Stratego သည် လူကြီးများအတွက် အကောင်းဆုံးဗျူဟာဘုတ်ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရန်သူအလံကို အောင်နိုင်စေရန် သင်ကိုယ်တိုင် တိုက်ခိုက်ခုခံကာကွယ်နိုင်သည့် ဂန္တဝင်ဘုတ်အဖွဲ့၊ ဆိုလိုသည်မှာ CTF အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ယုတ္တိနဲ့ ဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်မှုကို စမ်းသပ်နိုင်မယ့် မတူညီတဲ့အဆင့်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် အပိုင်း 40 နဲ့။
မိုနိုပိုလီ - ဂန္တဝင်၊ အဟောင်း...
Monopoly ၏ ဗားရှင်းများစွာရှိသော်လည်း အအောင်မြင်ဆုံးတစ်ခုမှာ ဂန္တဝင်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရန် နည်းဗျူဟာဂိမ်းမဟုတ်သော်လည်း၊ ကြွယ်ဝမှုအင်ပါယာကိုရရှိရန် အဝယ်အရောင်းကို စီမံခန့်ခွဲနည်းသိရန် ဉာဏ်ပညာအချို့ လိုအပ်ပါသည်။
ယင်းကြောင့် ပူးပေါင်းဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများမဟာမိတ်များနှင့် ကစားရန်၊ သင်ဝယ်နိုင်သော အကောင်းဆုံး ခေါင်းစဉ်များမှာ ရှိပြီးဖြစ်သည်-
အသက် 8 နှစ်မှ အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက် ဘုတ်ဂိမ်း။ ၎င်းသည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကို သင်ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားရမည့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့်ဂိမ်းဖြစ်ပြီး ကစားသမားများအားလုံး အတူတကွ အနိုင်ရမည် သို့မဟုတ် ရှုံးနိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သရဲခြောက်သောအိမ်ကြီး၏ ဝိညာဉ်သေဆုံးခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင် တည်ရှိနေသောအရာများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့် သူ၏ဝိညာဉ်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အနားယူရန်ဖြစ်သည်။ ကစားသမားတစ်ဦးသည် တစ္ဆေ၏အခန်းကဏ္ဍကို ခံယူထားပြီး ကျန်ကစားသမားများသည် လျှို့ဝှက်ချက်ကို ညွှန်ပြသည့် သဲလွန်စများစွာကို လက်ခံရရှိမည့် နတ်ကတော်များနှင့်အတူ ကစားကြသည်။
ဤဂိမ်းသည် သင့်အား လန်ဒန်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ 24၊ 1895 သို့ ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပါလီမန်တွင် ဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး Sherlock Holmes သည် ၎င်း၏လက်ထောက်နှင့်အတူ ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အမှန်တရားကို သိရှိရန် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆုရ မိသားစု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဂိမ်း။ ၎င်းတွင် သင်သည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကျွန်း၏ ရတနာများကို ပြန်လည်ရယူရမည့် စွန့်စားသူများ၏ အရေပြားတွင် သင်နှစ်မြှုပ်နေပါသည်။ အသက် 10 နှစ်မှ စတင်ကစားနိုင်ပါတယ်။ အန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားရန်နှင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရယူရန် ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုအတွက် ကတ်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများကို ပေါင်းစပ်ပါ။
ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဂိမ်းသည် အသက်2နှစ်နှင့်အထက် ကစားသမား4ဦးမှ 14 ဦးအတွက် သင့်လျော်ပြီး လူသားများကို ကပ်ရောဂါဘေးမှ ကယ်တင်ရန် သင်ကြိုးစားရမည်ဖြစ်သည်။ ပြန့်ပွားနေသော ရောဂါများနှင့် ပိုးမွှားများသည် အသက်ပေါင်းများစွာကို သေစေလျက် ပျောက်ကင်းအောင် ကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ သူတို့ဟာ ကုသနည်းကို ပေါင်းစပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ရှာဖွေရင်း ကမ္ဘာတဝှမ်းကို ခရီးထွက်ကြလိမ့်မယ်..။
လည်း သက်ကြီးရွယ်အိုများ သူတို့သည် «စီနီယာများ» အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ ဘုတ်ဂိမ်းများစွာကို ကစားနိုင်သည်မှာ အံ့သြဖွယ်အချိန်ဖြစ်သည်။ အချို့က ဂန္တဝင်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီး၊ ဤအသက်အရွယ်အုပ်စုကို ဆက်လက်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်၊ အချို့မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားနေရာများမှ တင်သွင်းလာသောကြောင့် အနည်းဆုံး ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် အနည်းငယ်အသစ်များဖြစ်သည်။ မပျောက်နိုင်သော ခေါင်းစဉ်များမှာ-
Educa - သင်္ကေတများ...
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ပဟေဠိတစ်ခု၊ အပိုင်းအစ 2000 နှင့် ဥရောပ၏ သင်္ကေတများ၏ လှပသောရုပ်ပုံများနှင့်အတူ။ တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပဟေဠိသည် 96 × 68 စင်တီမီတာရှိသည်။ ၎င်း၏ချစ်ပ်များသည် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အသက် 12 နှစ်၊ လူကြီးနှင့်အထက်ကလေးများနှင့်ကစားရန်သင့်တော်သည်။
ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘော 3D ပဟေဠိ
CubicFun ပဟေဋ္ဌိ 3D LED ...
လှပသောပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောကိုဖန်တီးရန် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော 3D ပဟေဠိတစ်ခု။ ခံနိုင်ရည်ရှိသော EPS ရေမြှုပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အတိုင်းအတာ 340x68x25 စင်တီမီတာရှိသော Queen Anne's Revenge ၏ပုံစံတူပုံစံတူကို တည်ဆောက်ရန် အပိုင်းပိုင်း 64 ပါရှိသည်။ တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းတွင် AA ဘက်ထရီ 15 လုံးဖြင့် ပါဝါ2လုံးပါသော LED မီးအလင်းရောင်စနစ်ပါရှိသည်။ အသက် 14 နှစ်နှင့်အထက်အတွက်သင့်လျော်သည်။
အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် စိတ်ထဲတွင်ရှိသော်လည်း မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် ဂန္တဝင်ဂန္တဝင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အော်တိုဘေ့စ်ဒရမ်၊ နံပါတ်များပါသော ဘောလုံးများနှင့် ကစားရန် ကတ်အစုံပါရှိပါသည်။ လိုင်းနှင့်ဘင်ဂိုကိုပထမရရှိသူသည်အနိုင်ရသည်။
သင်ရောနှောရန်၊ ပါဝင်သူများကြားတွင် ဖြန့်ဝေရမည့် နံပါတ်များ ပေါင်းစပ်ထားသော ကတ်များ နှင့် နံပါတ်များကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုက်ဆိုင်ပါ။ ၎င်း၏ချစ်ပ်များအားလုံးကို ဦးစွာပထမသူအနိုင်ရလိမ့်မည်။
Mattel Games UNO မူရင်း...
ကစားသမား2ယောက်ကို တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အသင်းများတွင် ကစားခွင့်ပေးသည့် ရင်းနှီးပြီး အလွန်ရိုးရာကတ်ဂိမ်း။ ပန်းတိုင်သည် ကတ်များမကုန်သော ပထမဆုံးသူဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ မင်းမှာ ကတ်တစ်ခုပဲကျန်တော့ရင် UNO လို့အော်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။
Lewpox Tic Tac - ဂိမ်း၏ ...
အလျားလိုက်၊ ဒေါင်လိုက် သို့မဟုတ် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုတွင် တူညီသောပုံစံ ၃ ခုကို နေရာချထားရန် ကြိုးစားရန် ပုံမှန် tic-tac-toe ဂိမ်း။ ပြီးတော့ မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကို သူအရင်မမှီနိုင်အောင် ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားပါ။
၃ လုံး ဆက်တိုက်ဝယ်ပါ။
စစ်တုရင်ဘုတ်၊ checkers နှင့် backgammon
မိတ်ဆက်စရာမလိုသော ဤဂန္တဝင်ဂိမ်းသုံးခုကို ကစားရန် 3-in-1 ဘုတ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် စံပြဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အသက်မပြည့်သေးသော ဂိမ်းများဖြစ်သောကြောင့် ကလေးများလည်း ကစားနိုင်သည်။
Parcheesi + OCA ဘုတ်အဖွဲ့
Fournier Parchis နှင့် Goose...
OCA နှင့် Parcheesi ဂိမ်းများသည် အချိန်တိုင်းတွင် လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများဖြစ်သည်။ ဤနောက်ပြန်လှည့်နိုင်သောဘုတ်ဖြင့် မိသားစုပျော်စရာဂိမ်းနှစ်ခုစလုံးကို သင်ရနိုင်သည်။
Fournier F20991 - ကြမ်းပြင်...
Fournier- နံပါတ် 505 ကုန်းပတ်...
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂန္တဝင်တွေထဲမှာ ကတ်စားပွဲဂိမ်းတွေကို လက်လွတ်မခံသင့်ပါဘူး။ စပိန်ကုန်းပတ်နဲ့ ဒါမှမဟုတ် ပြင်သစ်ကုန်းပတ်နဲ့ သင်နှစ်သက်သလို။ တူညီသောကုန်းပတ်တွင်များစွာသောဂိမ်းအမျိုးအစားများ (Uno, Pócker, Chinchón, Cinquillo, Mus, Solitaire, Blackjack,7နှစ်ခွဲ၊ Briscola, Burro,…) ဖြစ်သောကြောင့် သင်သည် မရေမတွက်နိုင်သောဂိမ်းအမျိုးအစားများကို ဆော့ကစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နည်းပညာအသစ်များ တိုးတက်လာမှုကြောင့် မကြာသေးမီကမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သော ဤအခြားအမျိုးအစားသည် မပျက်ကွက်နိုင်ပါ။ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ နှင့် virtual reality၊ augmented reality သို့မဟုတ် ရောနှောထားသော reality နည်းပညာများသည် board game ကစားသည့်ပုံစံကိုလည်း ပြောင်းလဲစေခဲ့သည် ။ တစ် မျိုးဆက်သစ် ဘုတ်ဂိမ်းများ လူကြီးများအတွက် ရောက်ရှိလာပါပြီ၊ ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ် ပရောဂျက်များကို သိထားသင့်ပါသည်။
အဝေးမှ သင့်မိသားစု သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများနှင့် ကစားရန် အွန်လိုင်း ဘုတ်ဂိမ်းများစွာ ရှိပြီး အချို့သော မိုဘိုင်းအက်ပ်များသည် ဂန္ထဝင်မြောက်သည့် ကစားသူမုဒ်တွင် သို့မဟုတ် စက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ကစားနိုင်သည်။ Google Play နှင့် App Store အက်ပ်စတိုးများတွင် ရှာဖွေနိုင်သည်။
အချို့သော ဝဘ်စာမျက်နှာများနှင့်အတူ အခမဲ့စားပွဲတင်ဖျော်ရည်များ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
မတူညီသောဂိမ်းများစွာကို သင်ပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်သည့် ဘုတ်ဂိမ်းတစ်ခုကို သင်မြင်ယောင်နိုင်သလော၊ အပိုင်းသုံးပိုင်းဖြင့် တည်ဆောက်မှုများနှင့် အရာဝတ္ထုများကို မြင်တွေ့နိုင်ပြီး အကွက်များမဟုတ်သော်လည်း အသက်ဝင်ကာ သူရဲကောင်းများ၊ ဘီလူးများ၊ တိရိစ္ဆာန်များ အစရှိသည်တို့ ဖြစ်လာနိုင်သည် ။? ကောင်းပြီ၊ စိတ်ကူးယဉ်တာကို ရပ်လိုက်ပါ၊ အဲဒါက augmented reality မျက်မှန်နဲ့ ကျေးဇူးတင်ရှိပြီးသားပါ။ Tilt Five လို့ခေါ်ပါတယ်။.
https://torange.biz/childrens-board-game-48360 မှ အခမဲ့ရုပ်ပုံ (ကလေးများ ဘုတ်ဂိမ်း)
အဆိုပါ၏အချို့ အများဆုံးမကြာခဏသံသယ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
လူကြီးများအတွက် board games ကဘာလဲ။
ဤအရာများသည် အားလုံးမဟုတ်သော်လည်း အရွယ်မရောက်သေးသူများအတွက် မသင့်လျော်သော ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုပါရှိသော ဘုတ်ဂိမ်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် သင့်လျော်သော အကြောင်းအရာများ ပါရှိသောကြောင့် ဖြစ်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် အိမ်ရှိကလေးငယ်များသည် ကစားနည်း သို့မဟုတ် ပျင်းရိငြီးငွေ့ရန် မသိနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီလို ဖျော်ဖြေရေး အမျိုးအစားကို ဘာကြောင့် ဝယ်တာလဲ။
တစ်ဖက်တွင်၊ မိသားစု သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများနှင့် ဂိမ်းကစားသည့်အခါတိုင်း ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်များကို ကုန်ဆုံးစေပြီး ရယ်မောခြင်းကို အာမခံပါသည်။ ထို့အပြင် ယခုအခါ ကပ်ရောဂါအခြေအနေနှင့်အတူ ၎င်းသည် အနားယူရန် ကြီးကျယ်ပြီး ဘေးကင်းသော အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းတို့သည် သင့်အား ပိုမိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရန် ကူညီပေးပြီး အများအားဖြင့် တစ်ဦးချင်းစီကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ဂိမ်းများဖြစ်သည့် PC ဖန်သားပြင် သို့မဟုတ် ဂိမ်းကွန်ဆိုးမှ ကင်းဝေးစေရန်လည်း ကူညီပေးပါသည်။ နီးစပ်သည့် ဂန္တဝင်ဘုတ်ဂိမ်းများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ခရစ္စမတ်အတွက် ဒါမှမဟုတ် တခြားနေ့စွဲတွေအတွက် လက်ဆောင်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့တောင် ယူလို့ရပါတယ်။
ဘုတ်ဂိမ်းများကို ဝယ်ယူရန် အထူးပြုစတိုးဆိုင်များစွာရှိပြီး လူကြီးများအတွက် ဤဂိမ်းအမျိုးအစားလည်း ပါဝင်သည့် အရုပ်ဆိုင်များရှိသည်။ သို့သော်၊ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုမှာ Amazon ကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများတွင် အွန်လိုင်းဝယ်ရန်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင့်တွင် စတိုးဆိုင်အားလုံးတွင် ရှာမတွေ့နိုင်လောက်အောင် များပြားသောဂိမ်းများစွာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင် အခွင့်ကောင်းယူနိုင်သော စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးနှင့် အခါအားလျော်စွာ ပရိုမိုးရှင်းများစွာရှိပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အားလပ်ခွင့်ပေးပါ » ယေဘုယျ » လူကြီးများအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများ